Vhidhiyo: Youtube Vhidhiyo Shanduko 2.0 | Martech Zone
Ini handizive nezvako, asi ini ndave kutanga kuona zvimwe zvakawanda kushambadza paYouTube. Sezvo vhidhiyo inova yakachipa uye ine simba, zvinoita sekunge yega nzira yekutengesa inoda kuiisa. Vhidhiyo yakasarudzika chaizvo nekuti inosvika kune wese munhu. Haasi munhu wese anoverenga, asi munhu wese anotarisa. Uye neYouTube yakaiswa pane angangoita ese mapuratifomu akabatana, hapana nzira yausingatarise mavhidhiyo eYouTube.
Kune vatengesi, iyo kukanganisa kwezviziviso pane akakodzera mavhidhiyo iri kuramba ichisimuka… saka haufanire kuenda kunze uye unotora videographer izvozvi (kunyangwe ini ndichiri kuzvikurudzira!). Zvinotaridza kunge indasitiri yakaita basa rakakura pakuita zvishoma nezvishoma kureba uye kureba kushambadzira kwevhidhiyo uye popover kushambadzira. Ndakaona kushambadza kwemaminetsi maviri rimwe zuva pane imwe vhidhiyo! Kazhinji kazhinji kwete, ini ndinoona iyo "Skip iyi Ad" kuverenga pasi, zvakadaro.
Ive neshuwa yekutora yako Youtube Traffic Chirevo kubva kuReel Kushambadzira Insider.
Tags: vhidhiyo infographicvhidhiyo kushambadziraYouTubeyoutube stats
Wedzera Youtube Maonero
Jan 12, 2013 pa 12: 56 AM
Ndatenda neruzivo rwenyu.Ndinoda kugovera nezvemasocial media masevhisi kunyanya eYouTube. Chengetedza basa rakanaka mu blog.